कहाँ नेर चुक्यो कांग्रेस ? « Sansar News
कहाँ नेर चुक्यो कांग्रेस ?
८ असार २०७७, सोमबार ११:३९
नेपाली कांग्रेसको आजको प्रमुख समस्या भनेको नेत्रित्वको लाचारिपन हो । नेत्रित्वको गतिहिनता हो । अहिलेको नेत्रित्वसँग आन्दोलन जेलनेलको अनुभब त छ तर बदलिदो समयको आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सुत्र छैन । यो नेत्रित्वले बिपिले लेखिदिएको समाजवादको नारामा पिङ त खेल्न जानेको छ तर त्यो पिङ्मा पोया थप्न जान्दैन । अब कांग्रेसलाई बिपिको समाजवाद रुपी पिङ्मा पोया थप्न सक्ने नेत्रित्व चाहिएको छ । अहिलेको समकालिन पहिलो पूस्ताका सबैमा त्यो ल्याकत छैन । आगामी महाधिबेशनबाट नेत्रित्व नयाँ पुस्तामा गएन भने कांग्रेसको उधो यात्रा तिब्रगतिमा चल्छ ।
यतिबेला नेकपा प्रचन्ड बहुमतका साथ सत्तामा छ । स्थानिय तह देखी केन्द्र सम्म नेकपाको सरकार छ । केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म सत्तामा नेकपा छ प्रमुख प्रतिपक्षमा कांग्रेस । संसदीय ब्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका गलत कदमको आलोचना गर्ने र सरकारलाई सहि बाटोमा हिंड्न वाध्य पार्ने हुन्छ । ४६ सालको प्रजातन्त्र पछी लामो समय सत्तामा रहेको कांग्रेससँग प्रतिपक्षमा रहेको अनुभव उती लामो छैन । कतै कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहँदा के भूमिका निभाउने भन्ने कुरा नै नबुझेको पो हो कि ? तर नेपाली कांग्रेसलाई त्यो नबुझ्न वा नजान्न छुट छैन । संसदीय ब्यवस्थालाई नै सर्बोपरी ठान्ने पार्टीले कसरी आफुलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा यती निरिह रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ ? प्रतिपक्षमा रहनु भनेको जुनसुकै बेला सत्ता संचालनका लागि तयार रहनु हो । आफुलाई बिकल्पका रुपमा हरदम तयार पार्नु हो । तर अहिलेको कांग्रेस त्यस्का लागि तयार देखिदैन । प्रतिपक्षले दरिलोसँग आवाज न उठाउने हो भने सत्ता पक्ष बेलागाम घोडा जस्तो हुन्छ । यो हाम्रोमा मात्र होइन संसारमा जहाँ पनि हुने यस्तै हो । छाया सरकारको अवधारणा यत्तिकै आएको होइन ।
४६ सालको प्रजातन्त्र पछी लामो समय सत्तामा रहेको कांग्रेससँग प्रतिपक्षमा रहेको अनुभव उती लामो छैन । कतै कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहँदा के भूमिका निभाउने भन्ने कुरा नै नबुझेको पो हो कि ? तर नेपाली कांग्रेसलाई त्यो नबुझ्न वा नजान्न छुट छैन ।
कांग्रेसको ईतिहास !
कांग्रेसको ईतिहासको पनि थोरै चर्चा गरौँ । बर्तमान जे जस्तो भएपनी ईतिहास कांग्रेसको गर्बिलो छ । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना देखि पछील्लो लोकतन्त्र स्थापना सम्म नेत्रित्वकारी भूमिकामा कांग्रेस रहयो । सिद्धान्तत लोकतन्त्रका आधारभुत मान्यतामा कांग्रेसले संका गर्ने ठाउँ दिएको छैन परन्तु लोकतन्त्रलाई बलियो र जनजिविकासँग जोडने सवालमा आशा अनुसार खरो उत्रेको छैन । सिदान्तमा बिपिको समाजवाद छ, व्यबहारमा पूँजीवाद छ । आज कांग्रेस खुम्चिएको यस्तै सिदान्त र व्यबहार बिचको आधारभुत भिन्नताले हो ।
नेपाली राजनीति कम्तिमा पनि अझै केही दशक नेकपा र नेका कै वरिपरि घुमिरहने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ । बैकल्पिक शक्तीहरु निर्णायक भूमिकामा तत्काल पुग्ने हैसियतमा देखैदैनन् । तथापी दलको गठन बिगठन र आकार फैलावट इतिहासको निस्चित कालखन्डमा खेलिएको भूमिकाले निर्धारण गर्दछ । २००७ सालको राणा बिरोधी आन्दोलनले कांग्रेसलाई र २०३६ र २०४६ सालको आन्दोलनले कम्युनिष्टलाई देशव्यापी बनाएको हो । माओवादी जनयुद्धले कम्युनिष्ट संघठन थप फैलायो । बैकल्पिक शक्तिको त्यो हैसियत बन्न नेकपा र नेकाको शक्ती तिब्रगतिमा क्षयिकरण हुनुपर्दछ । यो समय बिश्व मन्च नै खुला लोकतन्त्रमय हुँदा आफुलाई लोकतन्त्रको खाटी पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेस झनझन कमजोर हुँदै गएको छ । समय अनुसार आफुलाई परिवर्तन गरेन भने कांग्रेसको भूमिका र औचित्य स्वत : खुम्चिन्छ । अहिले पनि खुम्चिरहेको छ।
कुनै जमनामा प्रजापरिषद भन्ने पार्टी पनि थियो नेपालमा । सानदार ईतिहास भएको त्यो पार्टी बिलय हुन्छ भनेर सायदै कसैले कल्पना गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको आजको प्रमुख समस्या भनेको नेत्रित्वको लाचारिपन हो । नेत्रित्वको गतिहिनता हो । अहिलेको नेत्रित्वसँग आन्दोलन जेलनेलको अनुभब त छ तर बदलिदो समयको आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सुत्र छैन । यो नेत्रित्वले बिपिले लेखिदिएको समाजवादको नारामा पिङ त खेल्न जानेको छ तर त्यो पिङ्मा पोया थप्न जान्दैन । अब कांग्रेसलाई बिपिको समाजवाद रुपी पिङ्मा पोया थप्न सक्ने नेत्रित्व चाहिएको छ । अहिलेको समकालिन पहिलो पूस्ताका सबैमा त्यो ल्याकत छैन । आगामी महाधिबेशनबाट नेत्रित्व नयाँ पुस्तामा गएन भने कांग्रेसको उधो यात्रा तिब्रगतिमा चल्छ ।
भबिश्यमा के हुन्छ ?
कांग्रेसको भबिश्य के हुन्छ त्यस्को सबै भन्दा ठूलो चिन्ता आम कांग्रेस कार्यकर्तालाई पक्कै छ । आजीवन कांग्रेसमा लागेकाहरुको पार्टी सुध्रोस भन्ने चाहना अवस्य होला । निरासाका बिच कहि कतै आशा पनि होला । स्वतन्त्र र गैरकांग्रेसलाई पनि चिन्ता केमा छ भने कांग्रेस संगै मुलुकको भबिश्य पनि जोडीएको छ । त्यसैले आम जनता चाहन्छन प्रतिपक्ष बलियो होस् ताकी सरकारले गल्ती गर्ने मौका नपाहोस् । त्यो हेक्का कांग्रेसले राखेको देखिदैन । अलिकती सन्तुस्टी हुने ठाउँ कहाँनेर छ भने आशा लाग्दा युवा नेता कांग्रेसमा छन र ति एकाध घटनामा बाहेक कांग्रेसको मुल नेत्रित्वले भन्दा फरक ढंगले सोच्न सक्छन् । सोच र विचारमा पूस्ताको लडाईं कांग्रेसमा प्रस्ट देखिन्छ ।
कांग्रेसको दियो यतिबेला धिप धिप मात्र बोलेको छ । एकातिर शेरबहादुरहरुले जोड जोडले फुकेर निभाउन उद्दत छन् अर्कोतिर निभ्न लागेको दियोमा गगन–विश्व प्रकाशहरु सकी नसकी तेल थपिरहेछन् । हेर्न बाँकी छ निभाउने र बाल्ने बिचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कहिलेसम्म चल्छ र कस्ले जित्छ ?